Izindatshana zikaKelsey Cox ku Martech Zone |
Imibhalo nge UKelsey Cox
Akuwona umsebenzi olula ukuqhamuka nokuqukethwe abantu abafuna ukukufunda, ikakhulukazi ngoba okuqukethwe kuyindawo eyodwa lapho ikhwalithi ihlala ikhona ngaphezu kobuningi. Ngabathengi abafakwa inani elikhulu lokuqukethwe nsuku zonke ungakwenza kanjani okwakho kugqame ngaphezu kwakho konke okunye? Ukuzinika isikhathi sokulalela amakhasimende akho kuzokusiza ukuthi wakhe okuqukethwe okuhambisana nawo. Ngenkathi abathengisi abangama-26% basebenzisa impendulo yamakhasimende ukuyala okuqukethwe
Nakhu ukuthi ungayisebenzisa kanjani ibhulogi yakho ngokukhangisa kokuqukethwe
NgoLwesine, July 24, 2014 UKelsey Cox
Akunandaba ukuthi udala hlobo luni lokuqukethwe, ibhulogi yakho kufanele ibe yisizinda esikhulu sazo zonke izinto zokumaketha okuqukethwe. Kepha uqinisekisa kanjani ukuthi uhlelo oluphakathi lwezinzwa lusethelwe impumelelo? Ngenhlanhla, kukhona ama-tweaks alula azokhulisa ukusatshalaliswa futhi aqinisekise ukuthi abalandeli bakho bazi kahle kahle okufanele bakwenze ngokulandelayo. Kuphephile ukusho namuhla ukuthi abantu bayazithanda izithombe. Eqinisweni, i-athikili enezithombe iphelile i-2x
Ungayithola Kanjani Inhloso Yokuwina Kumdlalo We-E-Commerce
NgoMsombuluko, Julayi 14, 2014 UKelsey Cox
Ngenkathi kuNdebe Yomhlaba kungaphumelela oyedwa kuphela, izinkampani eziningi zingathola impumelelo emdlalweni we-e-Commerce. Kunamaqhinga afakazelwe asize abathengisi ukuthola amaphuzu. IBaynote ikukhombisa ukuthi ungabafaka kanjani abadlali abadlala phambili futhi wakhe uhlelo lomdlalo olunamandla ukuze ibhizinisi lakho le-e-Commerce likwazi ukuletha impumelelo ekhaya. Ngaphambi kokuthi kuqale isizini, amaqembu kufanele aqale atshale imali kubadlali abaphezulu. Uma kukhulunywa nge-e-Commerce 5 ngaphandle
Ukuthi Ibhizinisi Elixhunyiwe Lizoyakha Kanjani Imakethe Yezokuphepha Yomazisi eyi- $ 47B
NgoLwesibili, ngoJulayi 8, i-2014 NgoLwesithathu, July 9, 2014 UKelsey Cox
Ngonyaka odlule, ukwephulwa kwedatha okujwayelekile kudle izinkampani inani lama- $ 3.5M, okuyi-15% ngaphezulu kunonyaka odlule. Ngenxa yalokhu, ama-CIO afuna izindlela zokugcina idatha yabo yenkampani ivikelekile ngenkathi kunciphisa ukulahleka komkhiqizo kubasebenzi. IPing Identity iveza amaqiniso ngemakethe yezokuphepha kamazisi futhi inikezela ngezixazululo zokuthi izinkampani zingavumela kanjani ukufinyelela okuphephile ku-infographic engezansi. Ukwephulwa kwedatha kunomthelela omubi kakhulu kumakhasimende
Usebenzisa Izinsuku Ezingama-83 Ngama-imeyili
NgoLwesine, July 3, 2014 ULwesihlanu, July 4, 2014 UKelsey Cox
Umthengisi ojwayelekile ungene ngaphezulu kwamahora angama-2,000 39 ngonyaka kwezokuxhumana ngebhizinisi, ikakhulukazi emisebenzini ethile (28%) nasekufundeni / ekuphenduleni ama-imeyili (72%). Yize kubonakala sengathi imithombo yezokuxhumana iba yindlela yokuxhumana ethandwa kakhulu, njengoba izinkampani ezingama-87% manje zisebenzisa imithombo yezokuxhumana ngandlela thile, i-imeyili iseyintandokazi ephezulu phakathi kwamabhizinisi emhlabeni jikelele. Ngokwe-McKinsey Global Institute Report, ama-imeyili ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-XNUMX abhalwa usuku ngalunye. KumaMelika